🥇 လုံခြုံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော VPN- 10 ခုနှစ်၏ ထိပ်တန်း VPN 2022 ခု
✅ အခမဲ့ VPN
🥇 အကောင်းဆုံး VPN များ
PC အတွက် VPN
အော်ပရာ VPN ကို
Hotspot Shield ကို
Radmin VPN ကို
သူတို့အခါတိုင်း အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေးကို ပိုမိုစိုးရိမ်ကြသည် (ထို့ကြောင့် VPN ကို စိတ်ဝင်စားသည်) တိုးပွားလာသော ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ကြီးမားသော သူလျှိုမှုကိစ္စများ ကြောင့် မီဒီယာတွင် ဖော်ပြမှုဖြစ်လာသည်။ ကပ်ရောဂါကာလတွင်၊ SARS-CoV-2 သည် လူအများအား တယ်လီဖုန်းဆက်ရန် တွန်းအားပေးသောအခါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ လုပ်ငန်းကာကွယ်မှုအစီအမံများမပါဝင်နိုင်သော အိမ်ကွန်ရက်များမှ အရေးကြီးသော သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဒေတာကို ကိုင်တွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
VPN သည် သင့်ရုံးခန်း သို့မဟုတ် အိမ်ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် အပိုလုံခြုံရေးအလွှာကို ပေးစွမ်းရုံသာမက အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တတ်နိုင်စေရန် မူရင်းနိုင်ငံကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းဖြင့် သင်၏ IP ၏ မူလဇာစ်မြစ်ကို သင်ဆန္ဒအတိုင်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကန့်သတ် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ မင်းရဲ့ မူရင်းနိုင်ငံအတွက် အထူးသဖြင့် streaming content services သည် သုံးစွဲသူများစွာကို VPN တစ်ခုသို့ ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိပ်တန်း VPN 10 ခု
အဆိုပါအကြား အကောင်းဆုံး vpn ဝန်ဆောင်မှုများ ဤထိပ်တန်း 10 ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Nord VPN ကို
စျေးပေါသော ပရီမီယံ VPN ။ ၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များမှာ-
IP သည် နိုင်ငံပေါင်း 59 နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
IP သည် နိုင်ငံပေါင်း 90 နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
IP သည် နိုင်ငံပေါင်း 61 နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
Unlimited devices များ
IP သည် နိုင်ငံပေါင်း 94 နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
IP သည် နိုင်ငံပေါင်း 74 နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
IP သည် နိုင်ငံပေါင်း 80 နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
IP သည် နိုင်ငံပေါင်း 22 နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
IP သည် နိုင်ငံပေါင်း 190 နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
P2P နှင့် Torrent အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
IP သည် နိုင်ငံပေါင်း 46 နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
Netflix နဲ့ သုံးဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။
IP သည် နိုင်ငံပေါင်း 56 နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
VPN အကြောင်း သိလိုသမျှ
VPN တစ်ခုမငှားရမ်းမီ မင်းသိဖို့လိုတယ် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးကို ရွေးချယ်နိုင်စေရန်နှင့် VPN ဝန်ဆောင်မှုကို အမှန်တကယ် လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ မဆုံးဖြတ်ရန် အသေးစိတ်အချက်များ အတွဲလိုက်။
una VPN (Virtual Private Network)သို့မဟုတ် virtual private network သည် အခြေခံအားဖြင့် အင်တာနက်ကဲ့သို့ ကွန်ရက်တစ်ခုသို့ လုံခြုံသောနည်းလမ်းဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်စေမည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊ ကွန်ရက်အသွားအလာ၏ဇာစ်မြစ်ကို ရှုပ်ထွေးစေသောအချက်ကို အသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည် သင်၏အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (ISP) မှပေးဆောင်သည့် မူရင်း IP နှင့် ကွဲပြားသည်။
ထို့အပြင်၊ VPN သည်“ကုဒ်ဝှက်ထားသော လမ်းကြောင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုဆိုလိုသည်မှာ၊ MitM-type တိုက်ခိုက်မှု (Man in the Middle) ကဲ့သို့သော MitM-type တိုက်ခိုက်မှု (Man in the Middle) ကဲ့သို့သော sniffers (network packet sniffers) ကို အသုံးပြု၍ တိုက်ခိုက်မှုများမှ တစ်ဆင့် ရိုးရိုးစာသားဖြင့် ၎င်းတို့ကို ကြားဖြတ်ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုနိုင်စေရန်အတွက် အဝင်နှင့်အထွက်ဒေတာလမ်းကြောင်းအားလုံးကို ကုဒ်ဝှက်စနစ်ဖြင့် ကာကွယ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အသွားအလာကို ဖမ်းယူသိမ်းဆည်းထားနိုင်သော အချို့သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှပင် ဝှက်ထားပါမည်။
အထက်ဖော်ပြပါအားလုံးတွင် "ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး" အချို့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ IP ကိုပြောင်းခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည်သင့်အားလည်းခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင့်ပထဝီဝင်ဧရိယာတွင် ကန့်သတ်ထားသော သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသည့် အကြောင်းအရာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။. ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် အခြားနိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် ချန်နယ်တစ်ခုကို ကြည့်ရှုရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် သင့်အား ဤဝန်ဆောင်မှုကို ထိုနိုင်ငံမှ အသုံးပြုသူများအတွက်သာ ရနိုင်သည်ဟု အသိပေးသည့် မက်ဆေ့ချ်ကို ပြသထားသည်။ ကောင်းပြီ၊ ဤကန့်သတ်ချက်အမျိုးအစားကို VPN ဖြင့်ရှောင်ရှားနိုင်သည်...
အခမဲ့ vs အခပေး
တချို့ရှိပါတယ် လုံးဝအခမဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အကန့်အသတ်ရှိသော အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်သည့် အခြားအခပေးစနစ်များ။ VPN ကို အသုံးပြုရန် စဉ်းစားသောအခါတွင် သင်သည် အမြင့်ဆုံး လုံခြုံရေး လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် သင့်ဧရိယာရှိ အချို့သော ကန့်သတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်ယုံကြည်သင့်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။
အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကာကွယ်မှုအဆင့်နိမ့်သော်လည်း ၎င်းတို့တွင်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယာဉ်အသွားအလာကန့်သတ်ချက်များ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် လစဉ်။ ၎င်းသည် သင့်အား အခမဲ့များကို အပြင်းအထန်အသုံးပြုခြင်းမှ တားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဒေတာများစွာစားသုံးသည့် ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများ (အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့သည် HD သို့မဟုတ် 4K ဖြစ်ပါက) ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ပိုဆိုးတာက၊ အခမဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုတွေက ကိစ္စတော်တော်များများမှာ streaming ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့ ခွင့်မပြုပါဘူး။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် အခမဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ တစ်ခုကို ဝင်ရောက်သည့်အခါ သင်စိတ်ပျက်သွားလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သင်အမှန်တကယ်လိုချင်တာကို မရဘဲ အခကြေးငွေပေးရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်ပါ။ ထို့အပြင်၊ အခပေးဝန်ဆောင်မှုများသည် စျေးကြီးရန်မလိုပါ၊ ၎င်းနှင့်ဝေးသည်၊ သင့်အား ပရီမီယံဝန်ဆောင်မှုများရရှိရန် တစ်လလျှင် ယူရိုအနည်းငယ်ဖြင့် ပေးဆောင်နိုင်သည့်အရည်ရွှမ်းသောကမ်းလှမ်းမှုများရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံး VPN များ
မှ3, € 10
မှ2, € 75
မှ1, € 79
တစ်ခုခု အလကားရတဲ့အခါ သူတို့ပြောတာကို သတိရပါ။ ထုတ်ကုန်သည် သင်ဖြစ်သည်။. ဆိုလိုသည်မှာ၊ အချို့သော အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံ ရောင်းချရန်၊ သင့်စိတ်ကြိုက် ကြော်ငြာများပြသရန် သို့မဟုတ် ၎င်းအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကို ရယူရန် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးသော်လည်း တစ်ဖက်တွင် အမြတ်အစွန်းရနေသည်...
အခြားဝန်ဆောင်မှုများပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ bandwidth ကိုရောင်းပါ။ သင့်ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှု၏ အခြားဖောက်သည်များအတွက်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းတို့သည် ပရီမီယံအကောင့်ရှိသည့် သုံးစွဲသူများထံ လွှဲပြောင်းရန် သင့်အရင်းအမြစ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အသုံးပြုပါသည်။
Third-party VPN သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်လား။
သင်တတ်နိုင်သည်မှန်သည် သင်၏ကိုယ်ပိုင် VPN ကိုဖန်တီးပါ။ သုံးပြီး GNU/Linux နှင့် OpenVPN ပါရှိသော ဆာဗာတစ်ခု (သို့မဟုတ် အခြားလည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့် အလားတူဆော့ဖ်ဝဲ)။ သို့သော် ဤ VPN အမျိုးအစားသည် သင့်ကွန်ရက် bandwidth ၏ မြန်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွင် အနည်းငယ်ပို၍ ကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင် တင်းမာခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ဆာဗာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။
၎င်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူအများအပြားအတွက်ပင်မဟုတ်၊ သုံးစွဲသူအများစုအတွက် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် အသက်သာဆုံးဖြစ်သည်။ ပြင်ပကုမ္ပဏီ VPN ဝန်ဆောင်မှုကို ငှားရမ်းပြီး ၎င်းမှ ပေးဆောင်သော သက်တောင့်သက်သာမှုများကို ခံစားလိုက်ပါ။. ဤကိစ္စတွင်၊ သင်သည် client ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်ခံစားသည့်နေ့မှစ၍ စတင်ခြင်းအတွက် စိတ်ပူရန်သာလိုပါမည်။
VPN router ကိုဝယ်ရန် ရွေးချယ်မှုကောင်းပါသလား။
အချို့သော Router များ သို့မဟုတ် Router များလည်း ရှိနေသည်မှာ မှန်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် VPN ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်သည်။. ၎င်းတို့သည် ပျမ်းမျှထက် အနည်းငယ်ပို၍ ကုန်ကျလေ့ရှိသော ပရီမီယံ router များဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် အားသာချက်များနှင့် အပိုဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်တိုက်ပေးပါသည်။ ဥပမာ၊ ဥပမာ အချို့ကို သင်တွေ့နိုင်သည်-
Asus က RT ကို-AC86U
Linksys WRT32X ဂိမ်း
တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ ရွေးချယ်မှုကောင်းပေမယ့်၊ သတိထားသင့်တယ်။ အချို့သောစျေးပေါ VPN router မော်ဒယ်များနှင့်အတူ။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့က ၎င်းတို့တွင် ဤဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားရှိကြောင်း ညွှန်ပြသော်လည်း ၎င်းသည် client ကိုသာ ရည်ညွှန်းပြီး ဆာဗာမှ ပံ့ပိုးပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု နည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် သင်သည် ပြင်ပမှ ဝန်ဆောင်မှုကို ငှားရမ်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်တွင် မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိစေရန်၊ အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံး VPN router များကို စုစည်းထားပါသည်။
VPN Routers ကိုကြည့်ပါ။
ဒါကို သတိထားပါ။ အတော်များများက ဤ router များထဲမှ တစ်ခုကို ဝယ်ပြီး စိတ်အေးလက်အေး ရှိကြသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဒေတာသည် အကာအကွယ်မဲ့ ဖြစ်နေသေးသည်။
VPN အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များ
အခြားသော ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ပင်၊ VPN တစ်ခုတွင် ၎င်း၏ အားသာချက် အားနည်းချက်များရှိသည်။ ဒါပေမယ့် မင်းသူ့ကို ငှားဖို့ ဆွဲဆောင်ဖို့ အားသာချက်တွေက အများကြီး ပိုအားကောင်းတာ သေချာပါတယ်
ကွန်ရက်အသွားအလာကို ကုဒ်ဝှက်ခြင်း။ ထို့ကြောင့် သင်၏ဒေတာကို ရိုးရိုးစာသားဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရန်နှင့် လျှို့ဝှက်ထားမှုကို လေးစားရန် (ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူကြား လွှဲပြောင်းပေးသည့် အချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ)။ ၎င်းတွင် ဝဘ်ဘရောက်ဆာအတွက် သို့မဟုတ် အချို့သော သီးခြားအက်ပ်များအတွက် သင် configure လုပ်နိုင်သော ပရောက်စီဆာဗာများကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ အသွားအလာအားလုံးပါဝင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ သင့်စက်ပစ္စည်းများမှ အသွားအလာအားလုံးကို ကာကွယ်ပေးပါမည်။
ကြီးမြတ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အမည်ဝှက်. ကုဒ်ဝှက်ခြင်းအတွက်သာမက IP ၏ဇာစ်မြစ်ကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက်လည်းဖြစ်သည်။
သင့်ပထဝီဝင်ဧရိယာ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်ဖြတ်ပါ။ ထိုဝန်ဆောင်မှုကို အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်ဆောင်နိုင်သော အခြားနိုင်ငံများမှ IP ကို ​​အသုံးပြုခြင်း။
သင်၏ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် ISP (Telefónica၊ Orange၊ Eurona၊ Jazztel၊ Vodafone၊…) သင့်ချိတ်ဆက်မှု၏အသုံးပြုမှုကို သိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။. VPN မပါဘဲ သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် စာမျက်နှာများ၊ ခိုးကူးထားသော အကြောင်းအရာများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါက၊ စသည်တို့ကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသွားအလာအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ဆာဗာများမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး မှတ်တမ်းတစ်ခု ကျန်ရှိနေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ယင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဥပဒေအရ ISP သည် ထိုကဲ့သို့သော အချက်အလက်များကို နှစ်ပေါင်းများစွာ သိမ်းဆည်းထားရန် လိုအပ်သည်။ ဤဒေတာအားလုံးကို ကြော်ငြာကုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရအေဂျင်စီများ စသည်တို့ထံ ရောင်းချ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။
ဒေတာခိုင်မာမှုသို့ဖြစ်၍ မိမိတို့သွားလိုရာခရီးသို့ ရောက်သောအခါ မူလနေရာမှ ထွက်ခွာသွားသော အတူတူပင်ဖြစ်ပေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် မပြောင်းလဲပေ။
VPN တစ်ခုသည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းကို စတင်ရန် သို့မဟုတ် ရပ်ရန် ခလုတ်တစ်ခုကို နှိပ်ရုံသာ ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းအစား၊ ပရောက်စီဆာဗာများကဲ့သို့သော အခြားအခြားရွေးချယ်စရာဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အခြားလုံခြုံရေးအစီအမံများသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးမှုကို ဆိုလိုနိုင်သည်။
ချွေတာ. စျေးနှုန်းပါရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ကွန်ရက်ကို လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်နိုင်သော လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများအတွက် အခြားဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုများထက် များစွာနိမ့်ပါသည်။
သေချာတာကတော့ VPN မှာ မရှိပါဘူး။ မကောင်းတဲ့အချက်များ အလွန်မှတ်သားစရာ။ ၎င်းကိုဆန့်ကျင်သည့်အချက်နှစ်ချက်ကိုသာ မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်-
စျေးနှုန်း: အလကားတွေရှိပေမယ့် အသင့်တော်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလို့ မှတ်ချက်ပေးထားပြီးသားပါ။ ထို့ကြောင့် VPN ကောင်းကောင်းတစ်ခုရရန် ငွေပေးချေရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသောစျေးနှုန်းများမဟုတ်သော်လည်း လူအများစုအတွက် ခွင့်ပြုထားသည်။ VPN ပါသော router ဖြင့် ဤအခကြေးငွေများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်...
ဆက်သွယ်မှုမြန်နှုန်း: သေချာသည်မှာ၊ ဒေတာကို ကုဒ်ရေးသောအခါ၊ သင့်တွင် VPN မရှိပါက ၎င်းကို သင်မြင်နိုင်စေရန် ကုဒ်ဝှက်ထားပြီး စာဝှက်ထားရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းသည် သင့်အတွက် ပွင့်လင်းနေသော်လည်း၊ ၎င်းသည် မြန်နှုန်းကို လျှော့ချမည့် အပိုဝန်တစ်ခုဟု ယူဆပါသည်။ သင့်တွင် လျင်မြန်သော ADSL၊ ဖိုက်ဘာ optic သို့မဟုတ် 4G/5G လိုင်းရှိပါက၊ ၎င်းသည် ပြဿနာများစွာရှိမည်မဟုတ်ပါ။ နှေးကွေးသော ချိတ်ဆက်မှုများအတွက်သာ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည် (သို့မဟုတ် သင့်တွင် ဒေတာကန့်သတ်ချက်အချို့ရှိပြီး ကျန်လတစ်လျှောက်လုံး သင့်အား ၎င်းတို့နှေးကွေးသည့်အခါ)။
အဘယ်ကြောင့် VPN တစ်ခုလိုအပ်သနည်း။
VPN တစ်ခုရှိခြင်းသည် သင့်အထူးကိစ္စတွင် အဓိပ္ပာယ်ရှိမရှိ အကဲဖြတ်သင့်သည်။ မူအရ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းအတွက်၊ ၎င်းသည် ထိုက်တန်ပါသည်။ တကယ်တော့၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုတာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ ကွန်ရက်ပေါ်ရှိ အခွင့်အရေးတစ်ခုပါ။ VPN ဖြင့် ဤအရာကို သင်ဖြေရှင်းနိုင်သည် ။ ဒါပေမယ့့် တခြားဟာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သင် VPN ကိုဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်:
SARS-CoV-2: ကပ်ရောဂါသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီများနှင့် အလွတ်သတင်းထောက်များ တယ်လီဖုန်းဆက်သည့် လုပ်ငန်းများစွာ ရှိလာသည်။ ၎င်းတွင် (BYOD ကိုကြည့်ပါ) နှင့် သင့်အိမ်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ရန် သင့်ကိုယ်ပိုင်စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း ပါဝင်သည်။ ကုမ္ပဏီများစွာသည် အရေးကြီးသော သုံးစွဲသူဒေတာ (အခွန်ဒေတာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဓာတ်ပုံများ၊ ဉာဏပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒေတာ၊…) တို့ကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပြီး VPN မရှိဘဲ ၎င်းတို့ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ပေါက်ကြားခြင်း သို့မဟုတ် ကြားဖြတ်ခံရခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ရှာဖွေမှုဒေတာကိုကာကွယ်ပါ။− VPN တစ်ခုဖြင့် သင့်တွင် ယခင်အချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အပိုအကာအကွယ်အလွှာတစ်ခုရှိသည်။ အချို့သော ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ စသည်တို့ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် အများသူငှာ သို့မဟုတ် မလုံခြုံသော WiFi ချိတ်ဆက်မှုများကို အခြားသူများက စကားဝှက်များနှင့် အခြားအထောက်အထားများ သို့မဟုတ် ဒေတာအမျိုးအစားများကို ကြားဖြတ်ဟန့်တားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
အင်တာနက်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကို ရှောင်ပါ။− သင့်ပထဝီဝင်ဧရိယာတွင် မရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အက်ပ်တစ်ခုကို သင်တွေ့ပါက၊ VPN တစ်ခုဖြင့် အခြားနိုင်ငံမှ IP ကို ​​ရယူခြင်းဖြင့် ၎င်းကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ အချို့သော အွန်လိုင်းချန်နယ်များကို ကြည့်ရှုခြင်း၊ အချို့သော streaming ပလပ်ဖောင်းများတွင် မရရှိနိုင်သော အကြောင်းအရာများ (AppleTV၊ Netflix၊ Disney+၊ F1 TV Pro၊...) နှင့် Google Play၊ App Store ရှိ အချို့သောကန့်သတ်အက်ပ်များအတွက်ပင်၊ စတာတွေ စသည်တို့
P2P နှင့် Torrent ဒေါင်းလုဒ်များ: Torrent သို့မဟုတ် P2P ကွန်ရက်များမှ အကြောင်းအရာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ ခိုးကူးထားသည့် သို့မဟုတ် တရားမဝင်သော အကြောင်းအရာများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အခြားဝဘ်ဆိုက်များကြားတွင်၊ ၎င်းကို အမည်မသိနည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် VPN တစ်ခုကို သင် အားကိုးနိုင်ပြီး ISP သည် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို သတိမပြုမိနိုင်ပါ။ ဒါကတရားမဝင်ပေမယ့် ကိုယ့်အန္တရာယ်နဲ့ကိုယ် လုပ်မှာပါ...
သင်မြင်သည့်အတိုင်း VPN ၏ application များသည်သွားနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းသောလုံခြုံရေးထက်ကျော်လွန်...
အကောင်းဆုံး VPN ကိုရွေးချယ်ရန် ကျွန်ုပ်ဘာသိထားရမည်နည်း။
အချို့ရှိပါတယ် နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင်စောင့်ကြည့်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့် သင်သံသယရှိနေသည့် VPN ဝန်ဆောင်မှုအချို့ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါ။ ၎င်းတို့သည် ဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် ကောင်းသောညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆာဗာများနှင့် IP အရေအတွက်
NordVPN AES-256 လျင်မြန်စွာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၅ နိုင်ငံမှ6တပြိုင်နက် ပရိုမိုးရှင်း
CyberGhost AES-256 လျင်မြန်စွာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၅ နိုင်ငံမှ7တပြိုင်နက် လုံခွုံရေး
Surfshark AES-256 လျင်မြန်စွာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၅ နိုင်ငံမှ Unlimited စြေး
ExpressVPN AES-256 ကောင်းသော နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၅ နိုင်ငံမှ5တပြိုင်နက် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေး
ZenMate AES-256 ကောင်းသော နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၅ နိုင်ငံမှ Unlimited
Hotspot Shield ကို AES-256 လျင်မြန်စွာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၅ နိုင်ငံမှ5devices များ အရှိန်
TunnelBear AES-256 ကောင်းသော နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၅ နိုင်ငံမှ5devices များ နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု
ငါ့မြည်းကိုဝှက်ထားပါ။ AES-256 လျင်မြန်စွာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၅ နိုင်ငံမှ 10 တပြိုင်နက် P2P နှင့် Torrent ဒေါင်းလုဒ်များအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ProtonVPN AES-256 ကောင်းသော နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၅ နိုင်ငံမှ 10 တပြိုင်နက် Netflix နဲ့ သုံးဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။
PrivateVPN AES-256 ကောင်းသော နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၅ နိုင်ငံမှ6တပြိုင်နက် မိသားစုများအတွက် ရွေးချယ်မှုကောင်း
အချို့သော VPN ဝန်ဆောင်မှုများသည် နိုင်ငံအများအပြားတွင် ဖြန့်ကျက်ထားသော ဆာဗာအများအပြားရှိသည်၊ ယင်းသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အချို့က သင့်အား ပေးဆောင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသော IP ကျပန်း၊ သို့သော် အခြားဝန်ဆောင်မှုများက ထပ်ဆင့်သွားကာ ပြောကြားထားသည့် IP ၏ဇာစ်မြစ်ကို သင်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည်။
ဒါက အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ကန့်သတ်ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာ. ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် ဆွီဒင်တွင်သာ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ရယူလိုကြောင်း စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဤ VPN များထဲမှ တစ်ခုဖြင့် သင်သည် ဆွီဒင် IP ကို ​​ရနိုင်ပြီး၊ သင်သည် နောက်ထပ် ဆွီဒင်တစ်ဦးကဲ့သို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်...
encryption ကို algorithm ကို
၎င်းသည် အရေးကြီးဆုံးဒေတာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လုံခွုံရေး ဝန်ဆောင်မှုမှ။ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း လွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ အရည်အသွေးပြည့်မီသော VPN ဝန်ဆောင်မှုအချို့သည် အချို့သောနည်းပညာများဖြင့် စီမံခန့်ခွဲထားသော်လည်း ပိုမိုလုံခြုံလေလေ အမြန်နှုန်းနှင့် လုံခြုံရေးသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော မြန်နှုန်းနှင့် လုံခြုံမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။
VPN တစ်ခုကို ရွေးချယ်သည့်အခါတိုင်း၊ အားနည်းချက်များမရှိသော ခိုင်မာသော ကုဒ်ဝှက်ခြင်းဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်ပါရှိသည့် တစ်ခုကို ရွေးချယ်သင့်သည်။ အဲဒီထဲက တစ်ခု algorithms သည် AES-256 ဖြစ်သည်။၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်၊ ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုများစွာသည် ရရှိနိုင်သောအမြင့်ဆုံးတွင်ဖြစ်သည့် စစ်တပ်အဆင့်ကာကွယ်မှုကို ရွေးချယ်သည်။
ကုဒ်ဝှက်ခြင်းအပြင်၊ အချို့သောငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအတွက် အပိုအကာအကွယ်နည်းပညာများ သို့မဟုတ် အတိုင်းအတာများရှိသည်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင်၊ SHA-1၊ MD4 နှင့် MD5 ကဲ့သို့သော မလုံခြုံသော အယ်လဂိုရီသမ်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ချိုးဖောက်ခံခဲ့ရသည်။
ပြီးတော့ 100% လုံခြုံတဲ့စနစ်မရှိဘူးဆိုတာ သတိရပါ။ အန္တရာယ်အရှိဆုံးအရာက သင်ဟာ ခံနိုင်ရည်မရှိသူဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ဖို့ပါပဲ။ အမှန်တော့ တစ်ချို့က cybercriminals ၎င်းတို့သည် အားနည်းချက်အမျိုးအစားအချို့ သို့မဟုတ် စကားဝှက်ခိုးယူမှုကဲ့သို့သော အခြားမသမာသောနည်းလမ်းများကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ၎င်းတို့သည် အဆိုပါချိတ်ဆက်မှုများကို ချိုးဖောက်နိုင်ခဲ့သည်။
VPN ကို သင့်အား နှိမ့်ချရန် မလိုလားပါက ၎င်းသည် အရေးကြီးဆုံးဒေတာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ယက်အမြန်နှုန်း စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာနည်းလမ်း။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် ကောင်းမွန်သော မြန်နှုန်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အမြဲရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုအများစုသည် မြန်နှုန်းမြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နေသောကြောင့် အထူးသဖြင့် မြန်ဆန်သောချိတ်ဆက်မှု (ADSL၊ fiber optics၊...) ကိုအသုံးပြုပါက ပြဿနာများစွာရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် ကွန်ရက်ကိုယ်နှိုက်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်သော်လည်း VPN ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကိုယ်တိုင် သိမ်းဆည်းနိုင်သည့် ဒေတာကို ဆိုသည်။ အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ ဒေတာက ISP ရဲ့ ဆာဗာတွေ ဖြတ်သန်းသွားမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေက တဆင့် ဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မယ်။ VPN ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ.
ပံ့ပိုးပေးသူအချို့ မှတ်တမ်းဒေတာကိုသိမ်းဆည်းပါ။ သင့်အမည်၊ ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်၊ သင်၏ IP အစစ်အမှန် စသည်တို့ကဲ့သို့သော သင့်အား ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်သော ဒေတာ။ ယင်းကို အကြံပြုထားသောကြောင့် ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ဤဒေတာကို သိမ်းဆည်းခြင်း ရှိ၊ ၎င်းတို့ကို သိမ်းဆည်းထားသူများကို သတိပြုပြီး မှတ်တမ်းအနည်းဆုံး သိမ်းဆည်းထားသူများကို အမြဲရွေးချယ်ပါ။
အချို့သော အခမဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုများ ချို့တဲ့နေသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု ဒါမှမဟုတ် တော်တော်ဆင်းရဲတယ်။ ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုများတွင်၊ ၎င်းသည် အများအားဖြင့် အနည်းငယ်ပိုကောင်းပြီး 24/7 (တစ်ပတ်လျှင် 24 နာရီနှင့်7ရက်) ရှိသော်လည်း ကိစ္စအားလုံးတွင် တူညီမည်မဟုတ်ပါ။
အချို့သောဝန်ဆောင်မှုများသည် အာရုံစိုက်မှုကိုသာ ပေးသည်။ အင်္ဂလိပ်အခြားသူများမှာလည်း စပိန်ဘာသာဖြင့် ရပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် အီးမေးလ်ဖြင့် နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်ပြီး အချို့မှာ သင့်မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရန် သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် တိုက်ရိုက်စကားပြောခန်းများပင် ရှိသည်။
ပံ့ပိုးမှု သို့မဟုတ် ပလပ်ဖောင်းများ
အခမဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပံ့ပိုးမှုအနည်းငယ်နည်းသော်လည်း အခပေးဝန်ဆောင်မှုအများစုသည် ပံ့ပိုးထားသောပလပ်ဖောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်သောပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သော လည်ပတ်မှုစနစ်အမျိုးမျိုးတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည့် client ပရိုဂရမ်များရှိသည်။ Windows၊ macOS၊ Linux၊ Android၊ iOSစသည်တို့ အချို့က ၎င်းကို အချို့သော စမတ်တီဗီများနှင့် ဘရောက်ဆာများတွင် အပိုပရိုဂရမ်များမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုသည်။
အိမ်မှာ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်မှာသုံးတဲ့ Operating System အမျိုးအစားကို သေချာကြည့်ပြီး သင့်အတွက် ပေးနိုင်တဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို အမြဲရွေးချယ်ပါ။ တရားဝင် client ကိုထောက်ခံပါတယ်။.
ယခင်အပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်ပြောနေသော ဖောက်သည်များသည် အနည်းနှင့်အများ ဖြစ်နိုင်သည့် ဂရပ်ဖစ် အင်တာဖေ့စ် ရှိသည်။ ဖော်ရွေ. ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး VPN ကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတွင် အချို့သောဆက်တင်များပြုလုပ်ရန် မည်သည့်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုမှ မလိုအပ်ပါ။
၎င်းသည် အများအားဖြင့် VPN ကလိုင်းယင့်နှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့ ရိုးရှင်းပါသည်။ ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသက်သွင်းပြီး ၎င်း၏ "မှော်ပညာ" ကို စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်။
အခပေး VPN ဝန်ဆောင်မှုများတွင် သင်တွေ့နိုင်သည်။ စာရင်းသွင်းမှုပေးချေရန် နည်းလမ်းများစွာ. ဤငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများသည် များစွာရှိနိုင်သည်-
အကြွေးဝယ်ကဒ်: အသုံးပြုသူအများစုအတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ပုံမှန်ပါပဲ။
PayPal က: အချို့သောပလပ်ဖောင်းများသည် သင့်အီးမေးလ်ကိုသာ လိုအပ်သည့် ဤလုံခြုံသောပလပ်ဖောင်းမှတဆင့် ငွေပေးချေမှုကိုလည်း လက်ခံပါသည်။
အက်ပ်စတိုးများ မိုဘိုင်းပလပ်ဖောင်းများအတွက် အချို့သော VPN များသည် Google Play၊ App Store ကဲ့သို့သော မိုဘိုင်းပလပ်ဖောင်းများ၏ အက်ပ်စတိုးများ၏ ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေမှုကို ခွင့်ပြုပါသည်။
Cryptocurrencies: cryptocurrencies သည် Bitcoin ဖြင့်ပြုလုပ်သည့်ကဲ့သို့သော အမည်မသိငွေပေးချေမှုများကို လုံးဝခွင့်ပြုသည်။ VPN ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအများအပြားသည် ဤ cryptocurrency ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
အခြားသူများကို: အချို့က အခြားသော မတူညီသော နည်းလမ်းများကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အခေါ်အဝေါ်က ခေါင်းလောင်းမမြည်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ DMCAသို့သော် ၎င်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်ရေးဥပဒေအား ရည်ညွှန်းသော ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဥပဒေသည် ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ စာအုပ်များကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာ အမျိုးအစားအားလုံးကို ခိုးကူးမှုမှ အကာအကွယ်ပေးသည်။
၎င်းသည် VPN နှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သနည်း။ ရိုးရှင်းပါသည်၊ အချို့သော VPN ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် လိမ်လည်မှုကျူးလွန်သောအခါတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထံမှ တောင်းဆိုချက်များကို တုံ့ပြန်ရန်မစဉ်းစားသောနိုင်ငံများတွင် ၎င်းတို့၏ဌာနချုပ်ရှိသည်။ ဆိုလိုတာက သူတို့ ထဲမှာရှိတယ်။ တရားဝင် စခန်းများ ဒေတာများကို တရားစီရင်ရန် တောင်းဆိုပါက ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည်များအား အကာအကွယ်ပေးသည်။
သို့သော် VPN ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးသည် ဤဥပဒေများအပြင် ပရဒိသုအမျိုးအစားမှ လုပ်ဆောင်သည်မဟုတ်ပါ၊ အချို့မှာ ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်သည့် နယ်မြေတွင်ရှိသည်။ အဆိုပါတောင်းဆိုမှုများကို နေရာချပေးမည်ဖြစ်သည်။. ထို့ကြောင့် သင်သည် ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် သင်၏ VPN ကို အသုံးပြုပါက၊ ၎င်းကို အာရုံစိုက်သင့်သည်။ သို့သော်လည်း ဤဘလော့ဂ်မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိမ်လည်အသုံးပြုခြင်းကို မတိုက်တွန်းပါ...
1 ထိပ်တန်း VPN 10 ခု
2 Nord VPN ကို
5.0.0.1 ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးအတွက် ထင်ရှားသည်။
7 Hotspot Shield ကို
9.0.0.1 P2P နှင့် Torrent အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
10.0.0.1 Netflix နဲ့ သုံးဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။
11.0.0.1 မိသားစုများအတွက် ရွေးချယ်မှုကောင်း
12 VPN အကြောင်း သိလိုသမျှ
12.1 VPN ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
12.2 အခမဲ့ vs အခပေး
13 ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံး VPN များ
13.1 Third-party VPN သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်လား။
13.2 VPN router ကိုဝယ်ရန် ရွေးချယ်မှုကောင်းပါသလား။
13.3 VPN အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များ
13.4 VPN ၏အားနည်းချက်များ
13.5 အဘယ်ကြောင့် VPN တစ်ခုလိုအပ်သနည်း။
14 Nord VPN ကို
15 အကောင်းဆုံး VPN ကိုရွေးချယ်ရန် ကျွန်ုပ်ဘာသိထားရမည်နည်း။
15.0.5 VPN မင်္ဂလာပါ
15.0.6 Hotspot Shield ကို
15.0.10 Radmin VPN ကို
15.0.12 VPN ကိုနှိပ်ပါ
15.1 ဆာဗာများနှင့် IP အရေအတွက်
15.2 encryption ကို algorithm ကို
15.6 ပံ့ပိုးမှု သို့မဟုတ် ပလပ်ဖောင်းများ
15.7 အဆင်ပြေသော GUI
15.9 DMCA တောင်းဆိုမှုများ
အကောင်းဆုံး VPN များ
Android အတွက် VPN
လုံခြုံသော VPN 2022 - သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - ကွတ်ကီးများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များ